ဘာကိုအမြတ်နိုးဆုံးလဲ ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဘာကိုအမြတ်နိုးဆုံးလဲ ?
Posted by thit min on Jan 8, 2012 in Drama, Essays.. | 28 comments
သင်သည်ဘာကိုအမြတ်နိုးဆုံးလဲ သင်သည်ဘာကိုမြတ်နိုးပါသလဲ။ ဘယ်လောက်ထိမြတ်နိုးပါသလဲ။
သေသေခြာခြာစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်ပါ။ ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲဗုံးသံ၊သေနတ်သံများကြားတွင် စစ်သားသည် သူ့
အသက်ကိုမြတ်နိုးမည်။ မွေးဖွားခါနီး မိခင်သည်သူ့အသက်ထက် သူမွေးသောသားသမီးကိုမြတ်နိုးမည်။
ငွေရေးကြေးရေးစီးပွါးရေးအတွက် အသက်၊အချိန်၊ကိုယ်ကာယကိုအသုံးပြု၍ရှာဖွေရင်း ငွေကြေးစည်းစိမ် ခံစား
စံစားရခြင်းကိုနှစ်သက်လာပြီး ငွေကိုပိုမိုခင်တွယ် မြတ်နိုးမည်။ သူတော်စင်တပါး၊တယောက်သည် သူ့တရား၌
သူမွေ့လျှော်မြတ်နိုးမည်။ လောကီလူ့ဘဝတွင် ရေစုန်ရေဆန် ကူးလူးရင်း မဖြစ်မနေ
အခတ်အခဲလောကဓံများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ ငြိမ်းအေးစွာနေရသော “ဘဝ” ကိုလူတို့မြတ်နိုးမည်။
ဪ မိမိမြတ်နိုးရာရရေးက အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါလော။ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့လဲရလဲရဘာနဲ့ဘဲ
လဲရလဲရ ရတာလိုရင်းမဟုတ်ပါလားဟု စဉ်းစားသောအခါ မိမိ၏ရလိုမှုသည် သူတပါး၏
မျက်ရည်၊သွေး၊ချွေး၊တို့ဖြစ်ရလေပြီ။ မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် ကိုယ်မြတ်နိုးရာကိုရယူနိုင်ဘို့လိုသည်ဟု
ဆိုချင်သည်။ သင်မြတ်နိုးရာသည် ဘာလဲ။ ဤမြတ်နိုးရာသည် သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တခု
ဆိုပါစို့။ မြတ်နိုးရာကိုလမ်းလွှဲလိုက်ကာရှာမိသောသူ တယောက်ကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရန်ဘာလိုအပ်မည်နည်း?
အဓိကမြတ်နိုးရာသည် မှန်ကန်မှု၊သင့်တော်မှု ရှိသောအရာကောဖြစ်ပါသလား။
ဒါလုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်ပေါ့။ ကြိုက်တိုင်းလည်း တချို့ မရှက်မကြောက်လုပ်ကြသည်။
ရှက်စရာဟုမထင်သည့် ဆင်ခြင်တုံတရား၏အဆင့် အတန်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ထံမှအတုမြင် အတတ်သင်ခဲ့ခြင်း၊ ဒါမျိုးလုပ်မှဂုဏ်ရှိသည်ဟူသော သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတို့က
များစွာသောမြတ်နိုးမှု၏ ကောင်းမှု ဆိုးမှုကို ရုပ်လုံးပေါ်စေသည်။
ငါလုပ်တာမှန်တယ်ဟုထင်နေတတ်သူကအများစုဆိုတော့ မှားနေသည်ဟုမစဉ်းစားမိဘဲ မကောင်းမှု
ပြောဆိုလုပ် ကိုင်နေရသည်ကိုပင် တယ်ဟုတ်တဲ့ ငါပါလားဆိုပြီး ဖြစ်နေသော လောက ။
ဘယ်အရာကိုအဓိကမြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေ၊ အရံအားဖြင့်မြတ်နိုးသည်ဖြစ်စေ၊ သေချာတာကတော့
လူသည်ကိုယ့်ကို ကိုယ်သာချစ်သောသဘောရှိသည်။ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုစဉ်းစားတတ်သည်။
ငါတော်ငါတတ်ဟု ထင်မြင်သူများ၏ဗဟိုချက်ကား ပိုမိုအားကောင်းလှသည်။
လူတိုင်း ငါပြောတာ ယုံတယ်ဟုထင်သွားကြသည်။ လက်ခံထားကြသည်။
လက်တွေ့မှာ အားနာလို့မသိချင်ယောင်ဆောင်နေသူက များပါသည်။
လူမှုရေးဆိုတာသိတိုင်းပြောလို့ ဖြစ်တာမျိုးမှ မဟုတ်တာဘဲ။ သိသိကြီးနှင့် နားထောင်ပေးသည်ကို
အမှားကိုဆက်နေသော်လည်း တားသူမရှိပြီ။ အမုန်းခံပြောမဲ့သူဆိုတာ တော်တော်ရှားမည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါလား။
မာန်တက်နေသူတယောက်ကို ခင်ဗျား လုပ်ပုံ၊ပြောပုံတွေ မှားနေတယ်ဟုပြောရခြင်းလောက် ကြီးမားသော စွန့်
စားမှုမရှိနိုင်။ မပြောကြတော့၊ မထိန်းကျောင်းကျတော့ဘဲ အရှိန်ကျရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ်ဟုသဘောထားကာ
မီးလောင်ရာလေပင့်ကြီးပါ။ ထားပါတော့။ပြောလိုရင်းက လူဆိုတာကိုယ့်အမှားကိုယ်မသိရင် ပြင်ပေးနိုင်တဲ့
ကလေးအရွယ်မဟုတ်လို့ကတော့ တော်တော် ခက်သွားပါလားဟုတွေးမိခြင်းပါ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စမ်းစစ်ရင်
ကောင်းတာပေါ့ဟု ပြောလို့ရသော်လည်း တကယ်က ဘယ်လိုစစ်စစ် လျှော့လျှော့ပေါ့ ပေါ့လေးနဲ့
“ငါမဆိုးလှပါဘူး” ဟု သာအဖြေထွက်နိုင်တာမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဟာကိုယ်လဲစစ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့။
ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ အဖြေရှာကြည့်မိတော့ တခုကစာဖတ်ခြင်းပေါ့။
စာဖတ်ခြင်းကိုတော့ အများကသိပြီးသား ကလီရှေးကြီးမို့ဒီနေရာမှာအများကြီးမပြောတော့ပါဘူးနော်။
နောက်ကော လို့ စဉ်းစားမိတော့ ပိုကောင်းသည်ထင်မိသော နည်းတခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
နဲနဲတော့ ခက်မည်။လေ့ကျင့်ယူရမည့်သူများမည်ထင်ပါသည်။ ဒီလိုလေးပါ။
၁။ ကိုယ်သိပြီးသား၊ကိုယ်တတ်ပြီးသား၊နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါစေ လေးလေးနက်နက် နားထောင်ပါ။
၂။ ကိုယ့်အယူအဆ၊အစွဲအလန်း၊ယုံကြည်ချက်၊ခံယူုချက်ကိုခေတ္တမေ့ထားပြီး “ဗလာ”စိတ်ဖြင့် နားထောင်ပါ။
၃။ ပြောသူကို ချစ်ခြင်း၊မုန်းခြင်း၊ကြောက်ခြင်း၊တွေဝေခြင်း(မယုံကြည်ခြင်း)၊အထင်ကြီးခြင်း၊အထင်သေးခြင်း၊
ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊မကောင်းမြင်ခြင်း၊အကောင်းမြင်ခြင်း စိတ်များမထားဘဲ ပကတိသာမန်စိတ်ဖြင့်နားထောင်ပါ။
၄။ သူ့စကားလုံးများ၏ နောက်ကွယ်မှ သူ့စိတ်ကိုဖတ်နိုင်အောင်ကြည့်ပါ။
၅။ သူပြောသောစကားများက ဘာကိုဆိုလိုကြောင်း အနှစ်ချုပ်နားလည်အောင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။
၆။ ကောင်းသော မှန်သော အကျိုးရှိသော စေတနာပါသော စကားဘယ်နှစ်ခွန်းပါသလဲလို့စဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါ။
၇။ မကောင်းသော မမှန်သော အကျိုးမဲ့သော စေတနာမပါသော စကားဘယ်နှစ်ခွန်းပါသလဲလို့
ဆိုပြီးစဉ်းစားမိပါတယ်။ကျနော် စိတ်ကူးယဉ်ပြီးပြောနေတာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် (ဆီမီနာတွေမှာပေါ့နော်)
ကိုယ်ကပြောတဲ့သူထက် သူများပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ရတဲ့ သူ ဖြစ်ခဲ့ရတာတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။
လက်တွေ့မှာ ပထမနှစ်က ကလေးတွေရဲ့ စကားတွေကိုနားထောင်ပြီး သူတို့ဆီက မြင့်မြတ်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ
ပေမဲ့ ကိုယ်က နားထောင်ကြည့်လို့ သိ သွားရတာမျိုးပေါ့နော်။ နားထောင်ရတာကိုကြိုက်လာတယ်။
တချိန်ထဲမှာဘဲ ကိုယ်အထင်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ “ငါတကော စကားတွေ” လဲ သဘောပေါက်လာရတယ်။
ကိုယ်အထင်သေးတဲ့ ၊အထင်မကြီး (ပေး)နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားငယ်လေးတွေဆီက အဖိုးတန်စကားလေးတွေ
ရလာတယ်။ ကျနော်မှားနေလား၊ ကျနော်ကို ကောင်းအောင်ပြင်ပေးပါခင်ဗျာ လို့ပြောလိုက်တဲ့ စကားဟာ “ငါ”
ဆိုတဲ့ ဒီအတ္တကောင်ကို မိုးချုန်းပြီးလှန့်လိုက်သလိုတွန့်သွားတယ်။ ကောင်အောင်ပြင်ပေးရမယ်တဲ့လားလို့
စိတ်ထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်သွားတယ်။ ကျောင်း= ထိန်းကျောင်းခြင်း ရှိရာအရပ်မှာ၊ထိန်းကျောင်းနိုင်သူကိုယ်တိုင်က
ကောင်းပါမှ၊ သူတို့သူတို့လေးတွေးကို ကောင်းအောင်ပြင်ပေးလို့ရတော့မပေါ့။ ဖက်ဖူးရောင်ဆိုတဲ့
ရုပ်ရှင်အဟောင်းလေးကို ရေးတေးတေးမှတ်မိတယ်။ကလေးဘဝကကြည့်ဘူးတာ။ ဆရာကအရက်သောက်လို့
တပည့်ကအရက်သမားဖြစ်သွားတာကိုအဓိကထားပြောပြသွားသောရုပ်ရှင်လေးပါ။ တကယ်တော့ လောကမှာ
ကျောင်းကဆရာမှမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိက “လူလေးစားရတဲ့နေရာ” ရောက်နေရင် ကောင်းအောင်နေပြဖို့
ကိုပေါက်(မန်း)ကတော့ ဒီလိုဆိုပါတယ် ..
Ko Paut says:.. “သူများကို ပြောနိုင်ဘို့အတွက် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က တာလုံအောင် အရင်နေပြဘို့လိုပါမယ်။
ဒါက ကျနော်တို့လူ လူကြီးတွေစောင့်ထိန်းရမယ့် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ် သေချာပေါက်လိုက်နာရမယ့် အမှန်တ၇ားလို့
ကြိုးစားရမှာပါဘဲ။ 100%မရတော့လဲ 70% ပေါ့ဗျာ။ တချို့ကတော့ကိုယ့်အကျင့်စရိုက်တွေကို
ဘယ်လိုပြောပြော ပြင်စရာအကြောင်းမမြင်ဘူး ဆိုသူများနဲ့ ဒီစာဟာမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဘဲမှတ်ပေးပါ။
ဒို့ကတော့ဟန်မဆောင်ဘူး၊ပွင့်လင်းတယ်ဟေ့ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေကိုလဲမပြင်နိုင်ဘဲ
ခဏ ခဏ လူတောထဲ ချပြနေရင် ကိုယ့်ကိုလေးစားသူများက အမှားကိုအမှန်ထင် သွားတတ်ပါတယ်။
အမှန်ကိုသိနိုင် တွေးနိုင်တဲ့ သူတွေကြတော့လဲ စိတ်ထဲက “ဟင်” အဲဒီလိုကြီးလားလို့တွေးသွား မှာပေါ့။
အကျိုးဆက်ကအမှန်ကိုမမြင်နိုင်တော့တာပါဘဲ။ ဘာဖြစ်လဲကွာလို့ ပြောလာရင်လဲ ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ဆိုတော့ကာ “နားထောင်တတ်ခြင်း” ဆိုတာအရေးပါတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ အပေါ်က ခွန်နှစ်ချက်နဲ့
မိမိဟာ သူတပါးရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။
ကောင်းသော ပါတ်ဝန်းကျင် ဖြစ် “ပေး” ဘို့ သင်ရော ကျနော့မှာပါ တာဝန်ရှိကြပါတယ်။
ကျနော် နားထောင်ပေး ရတာကိုမြတ်နိုးပါတယ်။
ကျနော်မြတ်နိုးသော ဘဝကို “နားထောင်ခြင်း” ဟူသော “ပဲ့” လေးဖြင့် လိုရာရောက်အောင်
(ဆီမီနာ-၃ ဟာ ကျနော်က အမြင့်ဆုံးအဆင့်=ကလိုဏ်းမက်က်စ်လို့ စဉ်းစားထားလို့အချိန်ယူထားပါတယ်။
ဆီမီနာ-၂ရဲ့ ရလာဒ်ကို ကြည့်ပြီးတင်ဖို့ ချိန်ထားလို့ပါဘဲ။ လက်တွေ့ဆီကို ရောက်အောင်စဉ်းစားထားတာမို့
လက်ရှိအနေအထားတွေနဲ့ စိတ်သဘောထား အများရဲ့အယူအဆတွေကို အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပြီးရတဲ့အ
ဖြေကို ပေါင်းစပ်ဖို့ကအလွန့်အလွန်အရေးကြီးတာမို့ပါ။ ဒီလထဲမှာတော့ တင် ဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ဆွေးနွေးလိုသူများရှိရင်လည်း ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဆီမီနာလုပ်နိုင်ပါတယ်။စုပေါင်းအားလေးပါ။)
အယူဝါဒမတူတာ သဘောကွဲလွဲတာကတော့ နေရာတိုင်းမှာရှိနေမှာပဲ
မိဘနဲ့သားသမီးတောင် စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ရင် ပဍိပက္ခဖြစ်ကြတာကိုးနော်
အဲဒီလိုအယူအဆမတူတဲ့ သူတွေပေါင်းမိမှ အမြတ်ထွက်မှာပါ မဟုတ်ရင်ပျင်းစရာကြီး
ကိုယ်ကဘာကို မြတ်နိုးတယ် တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်
လူတော်တော်များများက ကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသေချာမသိပဲ သူတစ်ပါးအထင်ကြီးဖို့အရေးတွေ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပြီး အချိန်တွေကုန်နေကြတာတွေ့မိလို့ပါ..
ဇက်ကလေး ရယ် ..ပဋိပက္ခ မဟုတ်လားကွယ်…
P.S ကိုသစ်ရေ…….ကလေးတွေ ဆုံးမပြီးရင် အချိန်ယူပြီး သေချာ ဆွေးနွေးပါ့မယ် ဗျာ …
ခုတော့ ရှင်းဂျုကု လစ်ပီး ခေါင်းသွားဆေး လိုက်ဦးမယ် ဟီး….
ဒါပေမယ့် သိသိကြီးနဲ့တမင်ရေးတာကြတော့ ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဟင်
(သိသိကြီးနဲ့တမင်ရေးတာကြတော့ ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဟင်) ဆိုတော့…
အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက် ဆိုတဲ့ စကား ရှိတယ် မဟုတ်လား
အဲ – မှားလို့
စကားလုံးအသစ်အဆန်း တီထွင်ဖန်တီးသူ ပညာရှင်အဖြစ် လေးစားပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ် အမျိုးမျိုးရဲ့ ပကတိ စိတ်ထားလေးတွကို ကြားနိုင်အောင် ဖတ်နေဆဲ..နားထောင်နေဆဲပါ ကိုသစ်ရေ..
ပြီးတော့မှ အတုယူသင့်တာ ယူ..မယူသင့်တာကို ဖယ်ပြီး..အမှန်တွေမြင်နိုင်အောင်..မြတ်နိုးနိုင်အောင်..သင်ယူနေဆဲမို့ 
အမေ မွေးပေးတာ ကိုယ်လက်ခြေ မျက်လုံး နား နှာခေါင်း အကုန် အင်္ဂါအစုံ နဲ့ မို့ ၊ ရှိသမျှ အစိတ်အပိုင်း အားလုံး ကို သူ့ ဟာ နဲ့ သူ အသုံးချ ရုန်းကန် ရှင်သန် လူလားမြောက်ခဲ့ပါတယ် ။
ဘဝမှာ အများဆုံး လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ် ကို ပြောပါ ဆိုရင် “ နားထောင်ခြင်း ” ပါ ဘဲ ။
မွေးကာစ ကလေး ဘဝတုန်းက အမေ့ အသံ ကို ကြားခဲ့ရတယ်
မူကြို မှာ ဆရာမ တွေ ရဲ့ အသံ ကို နားထောင်ခဲ့ရတယ်
မူလတန်း ၊ အလယ်တန်း ၊ အထက်တန်း ဘဝတွေ မှာ လဲ ဆရာ/ဆရာမ များရဲ့ ဆိုဆုံးမ ၊ ပညာ သင်ကြား သံ များ ကို ဆက်တိုက် နားထောင်ခဲ့ရတယ် ။
ကျောင်းသားဘဝ ပြီးတော့ ၊ သူများ ဝန်ထမ်း လုပ်တဲ့ အခါကြလဲ အလုပ်ရှင် ရဲ့အမိန့် သံ ကို နားထောင်ရတယ် ။
အဲဒါတွေ က ပြန်မပြောသော နားထောင်ခြင်း နာခံခြင်း တွေ နဲ့ နားထောင်ခဲ့ခြင်းတွေ ပေါ့
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်တဲ့ အခါကြ အားလုံး ကို နားထောင်လို့ ရတယ် ။ အချို့ သော အသံများဟာ ကိုယ့် အတွက် တစ်ကယ် လိုအပ်ပေမယ့် ( ဥပမာ ကိုသစ်မင်း တို့ ၊ ကိုပေါက်တို့ ၊ ကိုဘလက် တို့ လို ဂေဇက် က အသံအချို့ တို့နဲ့လက်တွေ့ လောက ထဲ က အသံများ ) အချို့ သော အသံများ ကြတော့ နားထောင်ရုံနဲ့ တင် ဘဝပျက်သွားနိုင်တယ် လို့ ထင်မိတာပါဘဲ ။
အဲဒါကလည်း ကောင်းသောအသံ နဲ့ ဆိုးသောအသံ ဆိုတာ ၊ ကိုယ် အမြဲ ဖတ်နေတဲ့ စာတွေ ၊ ကိုယ် သင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေ ၊ ကိုယ့် ရဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ အသေးစိတ် ပြန်သုံးသပ်ပြီး နားထောင်လေ့ ရှိကြောင်း ရယ်ပါလေ
တရားတော်အရပြောရင် မိမိအမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်သင့်တာ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန် အချိန်ပိုင်းလေးပေါ့ဗျာ။ လက်တွေ့မှာတော့ မလွယ်လှဘူး။ တခါတလေတော့ စဉ်းစားတယ်၊ လူတွေ ဆုတောင်းကြတဲ့အခါ ဘာဖြစ်ပါစေ ညာဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းတယ်၊ ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းတာနည်းတယ်၊ ဒီထက်ပိုတွေးရင် အခုနေ ဖြုတ်ခနဲ မသေပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းရမယ်၊ ဒါမှ ကျန်တာတွေ ရှေ့ဆက်ဖြစ်နိုင်မှာကိုး။ သို့ပေမဲ့ပေါ့လေ….
ကျနော့်ဘဝမှာ အကျဉ်းအကြပ် ကြီးကြီးမားမား ကြုံခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒီကာလမှာ အတောင့်တဆုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်အသက်ရှင်ခွင့်၊ အသက်ရှုခွင့်၊ အိပ်စက်နားနေ သွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ပဲ။ ရလည်းရရော အဲဒါတွေကို မေ့သွားရောဗျို့..သူတို့ထက် ပိုမြတ်နိုးစရာတွေ ချက်ခြင်းပေါ်လာတယ်။
ကိုသစ်ပြောသလို နားထောင်တတ်ဖို့လည်း မလွယ်ပြန်ဘူး။ ကိုယ်ပြောတာကို သူများနားထောင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့က ပိုခက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ပြန်မပြော နားမထောင် ဆိုတဲ့စကားပေါ်လာရော။ ခက်တယ်ဗျာ လောကကြီးကိုက….
ကျွန်တော် ဂေဇက်မှာ ၀င်ဖတ်နေတာ ကြာပါပြီခင်ဗျာ
ဆရာသစ်မင်းရဲ့ စာတွေကိုလဲ အထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဆီမီနာတွေတော့ ၀င်မဆွေးနွေးဖြစ်ပါဘူး …
လူကြီးတွေရဲ့ အမြင်တွေကိုပဲ ကြည့်ချင်လို့ပါ..
နောက်များဆိုရင်တော့ တတ်သလောက်လေး ၀င်ကြည့်ပါဦးမယ်
မှားတယ်ဆိုရင် ဝေဖန် ထောက်ပြပေးပါ… (အားလုံး အားလုံးကိုပါ )
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ နားထောင်ခြင်း အနုပညာ လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးရမယ်ဗျို့။
ဒီစာသားကို ကျွန်တော့် အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတစ်ချို့ ဖတ်စေချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်မိတယ်ဗျာ။
သူများက မကောင်းလာခဲ့ရင်လည်း မဆုတ်မနစ် စိတ်ဓါတ်မကျ မပျက်ဘဲ ကြံကြံခံဖို့တော့လိုမယ်နော့်။
ပြောင်းလဲဘို့ ပြုပြင်ဘို့ တိုးတက်ဘို့မှာ
“ဗလာ”စိတ်ဖြင့်နားထောင်ခြင်း ဟာ အရေးပါလှပါတယ်ဗျာ။
ခံယူတဲ့ အိုးခွက် ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလဲအရေးပါပါတယ်။
ဘယ်လောက်နေရာလွတ်သေးလဲ ဆိုတာလဲ အရေးပါပါတယ်။
မှားနေရင်လည်း ပြန်ပြောရင် ရိုင်းတယ်ပြောမယ်…
၃။ ပြောသူကို ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ တွေဝေခြင်း(မယုံကြည်ခြင်း)၊ အထင်ကြီးခြင်း၊ အထင်သေးခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊မကောင်းမြင်ခြင်း၊အကောင်းမြင်ခြင်း စိတ်များမထားဘဲ ပကတိသာမန်စိတ်ဖြင့်နားထောင်ပါ။
တတ်နိုင်သရွေ့တော့ ဘာအတွေးမှမရှိပဲ နေကြည့်နေပါတယ်။
၆။ ကောင်းသော မှန်သော အကျိုးရှိသော စေတနာပါသော စကား ဘယ်နှစ်ခွန်းပါ သလဲလို့စဉ်းစားပြီးနားထောင်ပါ။
မကောင်းသောဆိုတာထက် မမှန်သောဆိုရင် ပိုမှန်မယ်။
စကားကြီး ခြောက်ခွန်း လူမှာထွန်းတဲ့.. ခု ၇ ခွန်းကို ထပ်ပြီး လေ့လာမှတ်သား လိုက်နာကြည့်ပါဦးမယ်။
Reply to ——————————->
၁။Moe Z says:
လူတော်တော်များများက ကိုယ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသေချာမသိပဲ သူတစ်ပါးအထင်ကြီးဖို့အရေးတွေ
ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားလေးလိုပါဘဲ။ အားနဲချက်ရှိသူတွေက “မာနတံတိုင်း၊မနာလိုကသိုဏ်းရှု”နေရုံဘဲ
ကိုယ်တော်အောင်ကြိုးစားဘို့မေ့နေကြတယ်။ ပြီးတော့ မရှိတာ မသိတာကို ဟန်ဆောင်ကြပြန်တယ်။
သိလာတဲ့နေ့ကစပြီး သင်ယူမှုတွေကလဲ ကျယ်ပြန့်လာလိုက်တာကွာ။ ယူသင့်မယူသင့်
အချို့ သော အသံများ ကြတော့ နားထောင်ရုံနဲ့ တင် ဘဝပျက်သွားနိုင်တယ် လို့ ထင်မိတာပါဘဲ ။
လုပ်စမ်းပါအုန်းကွာ၊ နားထောင်ရုံနဲ့ တင် ဘဝပျက်တာ ဘယ်လိုမျိုးလေးပါလိမ့်။ကျေးဇူးကွာကော်မန့်အတွက်။
ကိုသစ်ပြောသလို နားထောင်တတ်ဖို့လည်း မလွယ်ပြန်ဘူး။ ကိုယ်ပြောတာကို သူများနားထောင်အောင် လုပ်နိုင်ဖို့က ပိုခက်တယ်။
ကိုကြောင်ပြောလိုက်မှဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်ဘဝ ရောက်နေတယ်ဆိုတာသိတော့တယ်ဗျာ။ကျေးဇူးဘဲ။
ကျနော် အဲအလုပ်နှစ်ခုလုံးနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအဓိကအသက်မွေးနေရတာဗျ။ (အင်း- ငါလေးသနားပါတယ်)
၅။တောင်တန်း က မောင်ဆန်း says: (Edit)
မှားတာပေါ့၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဝေဖန်သင့်တာပေါ့(ခင်လို့ စ တာပါ)။
အဝိုင်းဆိုတော့ဝိုင်းဝန်းထားတာဆိုတော့ သိုင်းပိုး ဝန်းဝိုင်း ထားတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ။
မျက်စိ၊နား၊နှလုံးသားနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်အုန်းနော၊ တကယ်မကောင်းတာလားလို့ ။ကျေးဇူးပါ။
လွတ်အောင်လုပ်ထားပြီးနားထောင်ခြင်းက “ဗလာ” သဘောပါ။လက်တွေ့မှာတော့ဘယ်သူလွတ်နေပါ့မလဲဗျာ။
ဖန်တီးနိုင်သော စိတ် ကိုလေ့ကျင့်ယူရတာပါ။ အတွေ့အကြုံအရကျနော်ဆိုနှစ်နဲ့ကိုချီခဲ့တာပါ။လွယ်လွယ်နဲ့
၉။manawphyulay says: (Edit)
ဒီဟာက နားထောင်တာနော်၊ စကားကြီး ၆ ခွန်းကတော့ပြောတဲ့ဘက်ကပေါ့။ကျေးဇူးဘဲညီမရေ။
နားထောင်တတ်သူ.နားထောင်ကောင်းသူတွေက သူတပါးရဲ့မှားမှု.မှန်မှု ကိုသိလွယ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျ..ကျနော်လည်းနားထောင်တတ်သူဖြစ်ချင်တာပဲ။
မှားပေါင်းလည်းမနည်းလှဘူး. တီချယ်ကြီးရဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ပို့စ်မှာ နားထောင်မှုအကြောင်းလေး အကိုမန့်ထားတာတွေ့ထဲကသဘောကျနေတာ
အခုလိုပို့စ်အနေနဲ့ သေချာဖတ်ပြီး နားထောင်ရတော့ပိုနားဝင်သွားတာပေါ့ဗျာ..
ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ရသွားတဲ့ အတွေးလေးကတော့ ဗလာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်အောင် ကျမအတော်ကြိုးစား အားထုတ်ရအုန်းမယ်ဆိုတာလေးပါ….
ကျမကတော့ လိုအပ်ချက်တွေ သိပ်များနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခု ဖြစ်နေမလား မသိပါဘူး…
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတခုဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစား တည်ဆောက် ရအုန်းမှာပါ..
တန်ဖိုးအလွန် ရှိသော စာစုလေးပါ။
ဖတ်ရတာ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။
ဆရာသစ်မင်းပေးတဲ့ အတွေးတွေ..ကို လေးစားစွာ…လက်ခံ ပြီး တွေးယူပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ……… ကိုယ်အားထားရာ ဆိုလာပဲ ကိုသစ်မင်းရေ……….
“လက်တွေ့ဆီကို ရောက်အောင်စဉ်းစားထားတာမို့လက်ရှိအနေအထားတွေနဲ့ စိတ်သဘောထား အများရဲ့အယူအဆတွေကို …….”
လက်တွေ့ဆီကိုရောက်အောင် ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေနေမှန်တွေကို သေချာ သိထားပြီးခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
စိတ်သဘောထားတွေကတော့ အများစုကြီးက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို
လိုလားကြပါတယ်၊ ပြုပြင်ကြဖို့လည်း ဆန္ဒတွေရှိနေကြတယ်၊
တစ်ယောက်တည်းတော့လုပ်လို့မရဘူး၊ အများလုပ်လို့ ရမဲ့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းတော့ ပြောင်းကြရမှာပါ။
Reply to ————————–>
၁၀။amatmin says: ..
နားထောင်တတ်သူ.နားထောင်ကောင်းသူတွေက သူတပါးရဲ့မှားမှု.မှန်မှု ကိုသိလွယ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျ..
၁၁။ pooch says:
ဒီစာစုလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ရသွားတဲ့ အတွေးလေးကတော့ ဗလာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်အောင်
နှလုံးသားကိုရှင်းလိုက်ပါ။ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကိုဖယ်လိုက်ပါ။ နားထောင်တတ်သောနှလုံးသားဟာ
သန့်ရှင်းသောနှလုံးသား တစုံဖြစ်သွားလို့ ငြိမ်းအေးမှုကို ရတာမလို့ ကြိုးစားရကြိုးနပ်တယ်ခင်ဗျ။
၁၂။ alinsett says:
လက်ခံ ပြီး တွေးယူပါတယ်။
တွေးယူလို့ရတာလေး ကို ပြောပြပေးပါအုန်းခင်ဗျာ။
၁၃။ naywoonni says: (Edit)
ကိုယ့်နှလုံးသားက မှန်ကန်သောအသံကိုပါ ပြန်နားထောင်နေပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၁၄။ small cat says:
ကိုကြောင်လေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသည်ဆိုတာကို ကျနော် ကောင်းစွာနားလည်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျနော် တဦးချင်းလုပ်လို့မရသောအရာများကို လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။
ကျနော်ရည်ရွယ်သော လက်တွေ့ဆိုသည်မှာ၊ လက်တွေ့ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြုပြင်နိုင်သော
Individual reform ကိုသာဆိုလိုပါသည်။ ပူးပေါင်းအင်အားဟုဆိုလိုခြင်းမှာလည်းအကြံပေးခြင်း
ကိုယ်ဟာကိုယ်ပြုပြင်ခြင်းကို ရသလောက် လုပ်နိုင်သလောက် +၁ ဘဲဖြစ်ပါစေ၊လက်တွေ့လုပ်ရေးကိုဆိုလို
ဘဘ ဘလက်ပြောသွားတယ် …နားထောင်ခြင်း အနုပညာ တဲ့ ….
အဆိုပါ ၇ချက်ကို ရိုးရိုး သားသား ၀န်ခံရရင် မလိုက်နာနိုင်သေးဘူး ကိုသစ်ရေ…
ကျနော် ကြိုးစားပါဦးမယ်ဗျာ ….ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်နဲ့ပဲ …တွေးပြီး ၀န်ခံကြည့်မယ်နော်…
ပထမ တချက်ကို Branding ဘက်ပဲ နည်းနည်းနှောပြီး ပြောကြပါစို့ရဲ့ဗျာ …
တဖက်လူရဲ့brand image ဆိုတာ ကြီး က ခေါင်းထဲ ၀င်ဝင် နေရာယူ နေတတ်တာကလား ….
နံပါတ်-၃မှာပါတဲ့ ..ပကတိ သာမန်စိတ်ကလေး ရဖို့ အတော်ကြိုးစားရခက်ပါတယ်ဗျာ …
အချစ် အမုန်းမပါဝင်ရင်တောင် …physical status အသက်အရွယ် ..ကျားမ … သည bias တွေလွတ်ပြီး
နားထာင်နိုင်ဖို့ အတော် လေး နက်ရှိုင်းတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်ဗျာ ….
ဒုတိယတချက် ..သံသယ …..
ပထမအချက်ကို ကျော်လွှားနိုင်ရင်တောင် သံသယ ဆိုတာကြီးက နည်းနည်း(များများ) ဒုက္ခပေးတတ်တာဗျာ…
ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား … ရွှီးနေတာလား ….သူကိုယ်တိုင်ပဲ အယူလွဲနေတာလား…..ချောက်တွန်းတာလား …
အဆိုပါ လားပေါင်းများစွာက နှိပ်စက်တတ်ပါသေးတယ်ဗျာ…
(မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဗျာ …ကျနော့် အားနည်းချက် ကျနော် ကိုသစ်ကို ပြောပြ တာပါ ……)
သည်တော့ အမှန်ကို စေတနာနဲ့ တခုတ်တရ လာပြောပေးရင်တောင်မှ …ဟုတ်ကဲ့လား ဆိုပြီး ….
ပြန်လည် ရှာဖွေသုံးသပ် နဲ့ ……၀ှူး …မောတယ်ဗျာ ….
တခါတခါစေတနာနဲ့ ပြောတာတွေကို တောင် စော်ကားသလိုဖြစ်လားဖြစ်ရဲ့ …..
ကိုသစ်ရေ ..အထက်ပါ အချက်-၇ချက်အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ..
ကျနော် ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ …..
ကိုသစ်ရေ တခြား Point of view တခုအရလည်း ကျနော် ဆွေးနွေးမယ်နော် ….
P.S ရှင်ဂျုကု မသွားဖြစ်ပါ ..အ၀တ်လျှော်စက် ရေယိုနေပြီး ထမင်းအိုးက အကြောင်းမဲ့ ၁နာရီကြာမှ ကျက်ပါသည်…
သွားချင်၏ …..မသွားရသည့်အတွက် …စိတ်မကောင်း …သို့သော်မတတ်နိုင် …..
ဟီး ….. အထင်မကြီးပါနဲ့ ကိုသစ်ရယ် …..တကယ်က….အဲ့မှာဈေးချိုတဲ့ အင်ကန်း…印鑑 ဆိုင်လေးရှိတယ်..
လူသစ်တွေ အတွက် ကျနော် သွားလုပ်ပေးမလို့ပါ …သွားတာ ၂ခါရှိပြီ ..年末休みနဲ့ ပိတ်ထားတော့ ပြန်ပြန်လာရသပေါ့ ….
နည်းနည်းပြောမယ် များများနားထောင်ပေါ့မယ်ဗျာ။ကိုသစ်မင်းဆီက ဒီစာသားလေးတွေကို ကြိုက်လို့ ပါဗျာ။
“” သင်မြတ်နိုးရာသည် ဘာလဲ။ ဤမြတ်နိုးရာသည် သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တခု
ငယ်စဉ်က ကျနော့်ဘကြီးက သွန်သင်ပြော်ပြခဲ့ဘူးတာလေးက နားနှစ်ဖက်နဲ့နားထောင်ပါတဲ့….
ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကိုယ်ပြန်ကြားတဲ့နား သူများပြောတဲ့စကားကိုယ်ပြန်ကြားနား နားနှစ်ဖက်နဲ့နားထောင်ပါတဲ့…
နောက်ထပ် အတွေးရစရာ Post ကောင်းလေးတစ်ခု ရပြန်ပါရောလား။
ဒီတော့ ကျွန်မ အတွေးပွါးမိ တာလေး နဲ့ ဝင်လျှာရှည်ပါဦးမယ်။
မဆီမဆိုင် အတွေးချော် နေကလဲ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါကုန်လော့ ရွာသူ/သား အပေါင်းတို့။ :-)
ကျွန်မ အောက်ပါ နှစ်ချက် ကို ဖြည့်စွက်၍ဆွေးနွေး လိုပါတယ်။
(၁) လူသည်ကိုယ့်ကို ကိုယ်သာချစ်သောသဘောရှိသည်။ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုစဉ်းစားတတ်သည်။
(၂) မိမိဟာ သူတပါးရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။
~~~~ (၁) လူသည်ကိုယ့်ကို ကိုယ်သာချစ်သောသဘောရှိသည်။ထို့ကြောင့်မိမိကိုယ်ကို ဗဟိုပြုစဉ်းစားတတ်သည်။ ~~~~
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် ချစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကဲ့ အချစ်စစ် နဲ့ ချစ်ဖို့လိုပါတယ်။ သဘောက ပညာရှိ စွာ ချင့်ချိန်ပြီးချစ်မှ အချစ်စစ်/မှန် ဖြစ်တာမဟုတ်လား။
မိဘ က သားသမီး ကိုချစ်တာ မချစ်တတ်ရင် ကိုယ့်သားသမီး လေးတွေကို နှစ်သလို ဖြစ်သွားသလိုပါဘဲ။
ဒီတော့ ကိုယ့် ကိုယ်ကို လဲ အစဉ်အမြဲ ဆုံးမ ပြီး စိတ်ကို မြင့်မြတ်နိုင်သ၍ မြင့်မြတ်အောင် ထားမှ စိတ်ကို ထင်ရာမစိုင်း အလိုမလိုက် ဘဲနေမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ရာရောက်ပါမယ်။
~~~~ (၂) မိမိဟာ သူတပါးရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။ ~~~~
သူတစ်ပါးဟာလဲ မိမိ အလေးထားရမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် လို့ အပြန်အလှန် ညွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီတော့ မိမိက ပါတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထားတဲ့ အမြင် နဲ့ မိမိ ရဲ့စိတ်ဟာ ဆက်စပ်နေမှာပါ။
ကျွန်မ ဖတ်ဘူးတဲ့ ဆရာဖေမြင့် ဘာသာပြန် “မြို့သားများ” (ထင်ပါရဲ့ – မှားနိုင်ပါသည်) ဆိုတာ နဲ့ တွဲပြချင်ပါတယ်။ အများဖတ်ဘူးပြီးသား၊ ကြားဘူးပြီးသား တော့နေမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းကိုပြန်နွှေး ပေးရရင် –
မြို့တစ်မြို့ ကို ခရီးသွား လူစိမ်းတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီလူက ဒီမြို့လေးမှာ အခြေချ ချင်လို့လာလေ့လာသူပါ။
ဒီမှာတင် သူက မြို့ ရဲ့ အဝင် တံခါးပေါက် မှာ ထိုင်နေတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက် ကို “အဖိုး ဒီမြို့ မှာ နေလို့ကောင်းရဲ့လား၊ မြို့သူ/သား တွေ ကရော ဘယ်လို စိတ်ထား ရှိလဲ” ဆိုပြီးသွားမေးတယ်။
ဒီတော့ အဖိုးအိုက “မင်းအရင် နေခဲ့တဲ့ အရပ်မှာ ရော ဘယ်လိုလဲ ကွယ်” လို့ပြန်မေးတယ်။
အဲဒီလူက “မပြောချင်ပါဘူး အဖိုးရယ်။ ကျွန်တော် အရင်နေခဲ့ တဲ့ အရပ်မှာ လူတွေ က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြိုင်ဆိုင် ဝန်တို နေကြတာ။ စည်းစည်းလုံးလုံး လဲမရှိ၊ စည်းကမ်း လဲ မရှိ၊ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် လိမ်ညာ နေကြတာဘဲ။ ကျွန်တော် မပျော် ခဲ့ပါဘူး” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။
ဒီတော့ အဖိုးအိုက “အခု မြို့မှာလဲ မင်း အရင်နေခဲ့တဲ့ မြို့ကလူတွေ အတိုင်း လိုပါဘဲ လူလေးရယ် ” လို့စိတ်မကောင်းစွာ ပြန်ပြော ခဲ့သတဲ့။
ခဏနေတော့ နောက် ခရီးသွား တယောက် ရောက်လာပြန်ပြီး အဖိုးကို ပထမ လူမေးသလို မေးပြန်ပါတယ်။
ဒီတော့ အဖိုးကလဲ အရင်မေးခွန်း ဘဲ ပြန်မေးခဲ့တယ်။
ဒီလူက “အဖိုး ရယ် – ကျွန်တော့ အရင်မြို့ မှာ လူတွေ ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အလွန် ချစ်ခင်လေးစား ကြပါတယ်။ အချင်းချင်း ရဲ့ ယိုင်းပင်းပြီး ကူညီတတ်ကြပါတယ်။ အတော်ကြင်နာ တတ်တဲ့ လူတွေ မို့ ကျွန်တော့ မှာ မဖြစ်လို့သာ ခွဲရတယ်။ သတိရလှ တယ်ဗျာ” လို့ ဖြေပါတယ်။
ဒီတော့ အဖိုး ကလဲ “အခု မြို့မှာလဲ မင်း အရင်နေခဲ့တဲ့ မြို့ကလူတွေ အတိုင်း လိုပါဘဲ လူလေးရယ် ” လို့ ဝမ်းသာစွာ ပြန်ပြော ခဲ့သတဲ့။
ကျွန်မ အတွေး အမြင် ကို အနှစ် ချုပ်ရရင်ဖြင့်
ကိုယ်ဟာ ပါတ်ဝန်းကျင် ကောင်း မှာ နေချင် ရင် ကိုယ်ကိုယ်ကို အရင်ကောင်း အောင် နေဖို့ လိုပါသည် ဟု ထင်မိပါကြောင်း။
ပါတ်ဝန်းကျင် က မိမိ အပေါ် အဆိုးအကောင်း ဆိုတာဟာ မိမိ နဲ့သာ ဆိုင်သည်ဟု ထင်မိပါကြောင်း။
ထိုသို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းစေ ၍ ပါတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်စေရန်လဲ ဆရာသစ်၏ အချက် ၇ချက် ဟာ လိုက်နာရန် အလွန်သင့် သော နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆရာသစ် နှင့် အခြား ညီအစ်ကို မောင်နှမ တူ/တူမ များ ၏ မတူခြားနားသော အသံများကို နားစွင့်ရင်း
ဒီ comment ကို တင်ပြီးမှ အစ်မအေးကေကေ ရဲ့ “အမြတ်နိုးဆုံးသည် အမှန်တရား” Post လေးကို ဖတ်လိုက်မိတယ်။
အဲဒါကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မ ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်ထဲ က စကားတွေ ဟာ လက်တွေ့မှာ လွဲနေ နိုင်တယ် ဆိုတာ နားထောင်မိခဲ့တယ်။ အမှန်တရား ဟာ တကဲ့လက်တွေ့မှာ ပျောက်နေတတ်တာ ကိုပြန် ကြားခဲ့တယ်။
အစ်မရဲ့ အသံ နဲ့ ကျွန်မ လွဲတွေးမိတာကို အမှန်ကို ပြန်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ အစ်မအေးရေ။
ဒီတော့ ကျွန်မ မြတ်နိုးခြင်း သည် “အမှားကို သိလိုက်ခြင်း၊ ဝန်ခံခြင်းနှင့် အမှန်ကိုပြင်ခြင်း” :-)
မိမိကိုယ်တိုင် စောင်ထိန်းခဲ့သော သီလ ကျင့်ကြံခဲ့သော သမာဓိ လေ့လာစည်းပူးခဲ့သော ပညာ ပြုခဲ့ဘူးသော ဒါန တို့သည် မိမိ၏အမြတ်နိုးဆုံး ဟုယူဆမိပါ၏ (တနိုင်တပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ)
Reply to ——————————————>
၁၅။ inz@ghi says:
ကိုယ်ကစိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ညီ ခက်ခဲမယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိတာပေါ့။
ကိုယ်အဲဒီ ခွန်နှစ်ချက်ကိုပြည့်စုံစွာနားထောင်တတ်ဖို့ ၃ နှစ်လောက်အချိန်ကြာခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်။
မာစတာပထမနှစ်ကျောင်းသားတယောက်ကိုတောင် အထင်သေးတဲ့စိတ်မျိုးရှိနေသူက ပထမနှစ်ကျောင်းသား
တယောက်ရဲ့ ပရဲန်ဆဲန်တေးရှင်းကို သေသေချာချာလေးလေးစားစားနားထောင်ယူဘို့အရမ်းခက်ခဲ့တာပေါ့ကွာ။
ဒီကောင်လေးတွေ ဘာမှဖတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ဘာမှမသိပါဘူးကွာဆိုတဲ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ ငါကအားလုံးသိ
ပြီးသားဆိုတဲ့ ဘဝင်မြင့်တဲ့စိတ်နဲ့ တော်တော် အဆင့်ကိုခွါစဉ်းစားပလိုက်တာကိုးကွာ။
အဲဒီမှာ ခက်တော့တာဘဲညီရေ့။ တော်တော်လေးကိုကြိုးစားရင်းနဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ်လဲချ၊သူ့ကိုလဲမြှင့်တဲ့နည်းကိုရှာ
လိုက်တာ ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ ကိုယ်မလေ့လာဘူးတဲ့ ဖီးလ်ဒ်တွေသူတို့ကို လုပ်ခိုင်းလိုက်တာကွ။
ဥပမာ အမေရိကန် ဂမ်းဆိုစိုဒ်ရတီလိုဟာမျိုး။ဂျပန်အစားအစာတို့၏သမိုင်းကြောင်း ဘာညာပေါ့ကွာ။
အဲဒီမှာ နဲနဲ နားထောင်လို့ရလာတော့မှ ကိုယ့်ဖီးလ်ဒ်ဘက်ကိုယူလိုက်တော့ နားထောင်လို့ရသွားတယ်။
ရိုးရိုးလူချင်းဆိုရင်လဲ သူကျွမ်းကျင်ရာကိုမေးတယ်ကွာ။အဲဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ၆ သုံးမကျ ဘဝင်စိတ်ကိုလျှော့ချရ
ရလဲရသွားရော အဖိုးတန်တယ်ကွာ။ ဘယ်သူဘာပြောပြောကိုယ့်အတွက် အပေါင်းတစ်၊နှစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားရောဟေ့။
၁၆။ မောင်သန်းထွဋ် ဦး says:
ကျနော်တို့ ကိုယ်ပြောဘို့ဘဲ လောနေတတ်ကြတယ်ဗျာ။
၁၇။ zaw min says:
၁၈။ Khin Latt says:
ကိုယ်ဟာ ပါတ်ဝန်းကျင် ကောင်း မှာ နေချင် ရင် ကိုယ်ကိုယ်ကို အရင်ကောင်း အောင် နေဖို့ လိုပါသည် ဟု
ထင်မိပါကြောင်း။ပါတ်ဝန်းကျင် က မိမိ အပေါ် အဆိုးအကောင်း ဆိုတာဟာ မိမိ နဲ့သာ ဆိုင်သည်ဟု ထင်မိပါကြောင်း။
မဲ့ ပါပြီးသားပါ။ဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာရယ်၊ဇစ်မြစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ။
“သူငယ်ချင်းကောင်းရခြင်ရင် မိမိကိုယ်တိုင် သူငယ်ချင်းကောင်း ဖြစ်ရပါမယ်”လို့ကျနော်ခံယူထားပါတယ်။
ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရောင်ဆိုးမှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံး”သတိ”နဲ့ ကြည့်တတ်နေတတ်အောင် နေသူပါ။
ကျနော့မူလ ပုံစံပျက်အောင်အလွယ်တကူပြောင်းလေ့တော့မရှိပါဘူး။လွယ်တော့မလွယ်ပေမဲ့ ခက်တဲ့ကိတ်စတော့
ကျနော်တို့ “တက်ကြွစိတ်” =ကြွတက်မဟုတ် ရှိနေရင် တတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၁၉။ koaung says:
မိမိကိုယ်တိုင် စောင်ထိန်းခဲ့သော သီလ ကျင့်ကြံခဲ့သော သမာဓိ လေ့လာစည်းပူးခဲ့သော ပညာ ပြုခဲ့ဘူးသော
ဒါန တို့သည် မိမိ၏အမြတ်နိုးဆုံး ဟုယူဆမိပါ၏
နှလုံးသားရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတော့ အမြတ်ကြမ်းတယ် ဆရာအောင်ရေ့။ သာဓု၊သာဓု၊သာဓုပါခင်ဗျာ။
အမှန်တရားကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော အစ်မ၏ “မှန်၏” က အလွန်အားပါလှပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဖိုးတန်တဲ့ စာလေးတွေပါ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝအတွက် အထောက်အကူတစ်ခုပေါ့ ကြိုးစားသွားပါ့မယ် ဆရာသစ်